जब्सको जीवन रहस्य के हो ? | TGuff
स्टिभ जब्सलाई दृढ विश्वास थियो अहिले बाँचेका हरेक विन्दूहरु भविष्यमा कतै न कतै गएर जोडिन्छन्। र अहिलेको जीवन हिजोका विन्दूहरूको समष्टि हो। त्यही भएर उनको जीवन कहिलै कसैले भविष्यवाणी गर्ने किसिमको भएन। जन्मनासाथ आमाले उनलाई अर्कैलाई सुम्पिदिइन्। एक सेमेस्टर पढेपछि स्टिभले कलेज छोडे। २१ वर्ष पुग्दा उनले आफ्ना पिताको ग्यारेजमा एप्पल कम्पनी सुरुवात गरे। कुनै बेला सातामा एक छाक खान ७ माइल हिँडेर हरेकृष्ण मन्दिर पुग्ने जब्स पछि मल्टी मेलेनियर अमेरिकीहरुको सूचिमा माथ्लो स्थानमा पुगे। प्रफेक्सनिज्म, टेस्ट तथा डिजाइन स्टाइलमा माहिर जब्सको एप्पल उनी मर्नुअघि नै विश्वको नम्बर वान ब्राण्डको रुपमा दरियो। ‘मेरो जीवन कथा म जन्मनुभन्दा पहिलेदेखि नै सुरु हुन्छ’ पूर्वीय दर्शनको गहिरो प्रभाव परेका स्टिभको बुझाइ थियो।
एउटा १९ वर्षे कलेज ड्रपआउट ठिटो अमेरिकी जागिर छाडेर अध्यात्मिक प्यास मेटाउन भारततिर निस्कन्छ। हरिद्वार आइपुग्दा स्टिभका गुरुले पहिलै प्राण त्यागेको थाहा हुन्छ। चन्दन र धोती लाएको भरमा धर्मको धाक लाउने अन्यले स्टिभको अध्यात्मिक तिर्खा मेटाउने सामर्थ्य राख्दैनन्। ‘यी गुरु र बुद्धिबिलासी सिद्धान्तकारभन्दा थोमस अल्बा एडिसनले संसारलाई केही दिएका छन्’, भारत छाड्नुअघि जब्सको निष्कर्ष निकाल्छन्। यसअघि स्टिभले पढिसकेका हुन्छन् अटोबागोग्राफी अफ परमहंश योगानन्द, बेद, कस्मिक कन्सियसनेस सहितका दर्जनौं अध्यात्मिक पुस्तक।
‘तिमी जीवनमा के गर्न चाहँदैछौ त्यो महत्वपूर्ण हो, बाँकी सबै अवरोध हुन्’, आफ्नो काम बारे यति केन्द्रित हुनसक्ने क्षमताका पछाडि जेन बुद्धिस्ट टिचिङको ध्यान मुख्य कारक थियो। ‘हरेक दिन यसरी बाँच त्यो तिम्रो जीवनको अन्तिम दिन हो’, १७ वर्षको उमेरमै जब्सले सुन्छन्। उनको चेतनाले भन्छ- ‘यो कुनै दिन सत्य हुनेछ।’
गत वर्ष जब्सको निधन भएपछि क्यारेन ब्लुमेन्थलद्वारा लेखेको एप्पल पूर्व सीइओको बायोग्राफीले जब्सको जीवन रहस्यलाई थोरै नियालेको छ। बजारमा चम्किएको जब्सको स्ट्यालिश इमेज मिडियाका लागि सधैँ हटकेक बन्यो। तर त्यो स्ट्यालिस इमेजभित्रको अन्तरमुखी राज के थियो ? ब्लुमेन्थलको बायोग्राफीले यो पाटो खासै उठान गर्दैन। त्यसैले उनको अध्यात्मिक यात्रा बुझ्न टाइम म्यागेजिनका प्रबन्ध सम्पादक वाल्टर आइज्याक्सनले लेखेको अर्को बायोग्राफी पढ्नै पर्ने भयो।
जब्सले स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीको दीक्षान्त समारोहलाई गरेको सम्बोधन। नेपालीमा पढ्नुहोस्, इङ्लिसमा सुन्नुहोस्
स्टिभ जब्सका जेन ध्यान गुरु चिनो ओटा गोवा
Apple, Namaste, Steve Jobs
किन फ्लप भयो हाइवे?